နိုတိုခွန်းဂေါ . ဟာတဂုအီဝ ၏ ရှုခင်းနေရာ ZEKKEI Japan
ပင်လယ်ထဲမှာ ပူးတွဲနေတဲ့ အကြီးအသေးကျောက်တုံး ၂တုံးက အထွတ်အမြတ်ထားရာ အစောင့်အရှောက်ကြိုးဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ အထည်အလိပ်နတ်ဘုရားက တောပုန်းဓါးပြတွေ တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတဲ့အချိန်မှာ စက်ပစ၁ည်းတွေကို ပင်လယ်ထဲ ပစ်ချနေတုန်း ရုတ်တရပ် ကျောက်တုံးတုံး ၁ တုံးအဖြစ် ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ ပုံပြင်က ကျန်ရှိနေပါတယ်။ နေလောင်ခံနေရင် ပင်လယ်ရဲ့ ဆည်းဆာနေညိုရောင်ထဲမှာ ကျောက်တုံးရဲ့ အမဲရောင်ပုံရိပ်တွေ ပေါ်နေတဲ့ရှုခင်းက အံ့သြစရာကောင်းလှပါတယ်။
Ishikawa-ken Hakui-gun Shiga-chō togi hitsumi
ကြီးတဲ့ကျောက်တုံး မိန်းကလေးကျောက်ဖြစ်ပြီး သေးတဲ့ကျောက်တုံးက ယောင်္ကျားလေးကျောက်တုံးဖြစ်တယ်။ သီးခြားနာမည် ( ဇနီးမောင်နှံကျောက်တုံး ) လို့ လည်း ပြောတယ်။
JRNanaosen `Hakui ဘူတာ မှ ဟိုခုတဲစွတ်နိုတိုးဘတ်စ်ကား တိုးဂိ သွားတဲ့ ကားစီးပြီး ( Urukami ) ဆင်းပြီးနောက် ၅ မိနစ် လမ်းလျှောက်
နိုတိုခွန်းဂေါ . ဟာတဂုအီဝ၏အနီးအနားနေရာများ၅၀ကီလိုမီတာအတွင်း